Awkward Dimensions Redux yemahara surrealism mutambo pane Steam | Linux Vakapindwa muropa
Awkward Dimensions Redux - Yemahara Surrealism Game pane Steam
Awkward Dimensions Redux ndiwo mutambo wakasiyana kune izvo zvatinogona kuona kazhinji mumitambo yemavhidhiyo kana zvirinani kune yangu chikamu ini ndajaira kutarisa mitambo yemavhidhiyo yehondo dzevazhinji, zviitiko, kuita, mitambo, nezvimwe.
Yakajairika kutaura, asi Awkward Dimensions Redux inochinja zvachose izvi. Awkward Dimensions Redux mutambo wevhidhiyo yakagadzirwa naSteven Harmon mudzidzi wepamusoro weDenver.
Mutambo yakavakirwa pane surrealism uye zviroto, inovavarira kuratidza kushungurudzika kwevechidiki, mairi inoongorora kuvhiringidzika kwekuve uye neanotyisa maitiro ehukama hwevechidiki.
Kufadzwa nezvose zvepfungwa nemitambo, iko kurudziro yetimu mbiri idzi inogona kutsanangurwa zvakajeka semutambo mukuru unonakidza uye mutambo wechienzi chimwe chinhu chisingajairike.
Harmon akaenderera mberi achiti Awkward Dimensions Redux yaive muunganidzwa wehope dzaakanyora mumubhedha wake diary pese paakamuka.
“Kana ndangogadzira zviwanikwa uye ndadzokorodza hope, ndinenge ndazogona kuzvionazve. Ini ndaizogona kuzvionera ndega nehumwe hunyanzvi uye kunyangwe kune imwe nhanho ndaizozviongorora pachangu kuburikidza nedudziro yangu yeangu pfungwa dzisinganzwisisike, »
“Mutambo wakave nzvimbo yekutora zvinorehwa nehope sezvishuwo zvangu muhupenyu nekutya kunouya nazvo, kwete zviroto chaizvo. Iyo pendi yenguva muhupenyu hwangu apo chero munhu anogona kupinda munzvimbo yangu, dzidza zvese nezvangu panguva iyoyo, kana vakatarisa zvakaoma zvakakwana enda «
Awkward Dimensions Redux inonzi "mutambo nezvehope uye kushushikana." Iyo indie inofamba simulation mutambo, ine inopfuura 18 zvikamu zvipfupi. Iko kufamba mumutambo kunogumira pakufamba, kusvetuka uye kuongorora.
Mutambo wacho pachawo Inosanganisira nguva iri pakati pemaminitsi makumi maviri neawa, Kunyangwe iyo nguva ipfupi kwazvo panguva yekugara kwako mumutambo, chinangwa chako mairi ndechekunzwisisa mumwe munhu kuburikidza nekududzirwa kwezviroto zvavo, pfungwa, kutya, zvishuwo, fungidziro uye zvakapfuura zvavo.
Awkward Dimensions Redux inosanganisira zviroto zvakasiyana-siyana nenzira dzehukuru hukuru hwakawanda hwemasuwo kune mamwe madhijidhi uye zvikamu FMV. Akaunti cpane inonakidza rwiyo naClawfoot Kurara, Halina Heron, American Ambuya, Pablo Garduno, Dong Lee, Steven Hamon naFranz Liszt.
1 Maitiro ekuisa Awkward Dimensions Redux paLinux?
1.1 System zvinoda
2 Ungatamba sei Awkward Dimensions Redux?
Maitiro ekuisa Awkward Dimensions Redux paLinux?
Kana iwe uchida kuisa uyu mutambo unogona kuzviita kubva SteamIwe unongofanirwa kunge uine iyo kuiswa pane yako system. Mutambo uyu wakasununguka zvachose kuti uuwedzere kuraibhurari yako yaunofanira kuenda kune inotevera chinongedzo.
Iye zvino kana iwe usina Steam yakaiswa uye haudi kuzviita nenzira iyi, tinogona kuisa mutambo wevhidhiyo nekuirodha pasi zvakananga kubva chinotevera chinongedzo.
Pano tinogona kuona bhatani kuti tiiwane nekudzvanya pairi, hwindo rinowoneka richikumbira kubatana kwepasi pe1 dhora, ichi chatova chisarudzo chako pachako mari yekupa.
Kana iwe usiri kuda kupa panguva iyo iwe unogona kuseta iyo huwandu kune zero uye wopa iyo yekurodha bhatani ichave inogoneswa.
Kuti utambe mutambo uyu wevhidhiyo pakombuta yako, zvinokurudzirwa kuve nemutambo wakasarudzika wemitambo:
Iyo Intel Core i3 2,00 GHz processor kana AMD yakaenzana
Iyo NVIDIA GeForce 330 kana zvirinani kadhi yemifananidzo ine 1GB yekuyeuka
2 GB ye RAM.
Ungatamba sei Awkward Dimensions Redux?
Mutambo uri mumunhu wekutanga uye mutambo wekutonga ndeaya anotevera:
W kiyi inofamba ichienda kumberi, S ichidzokera kumashure, A ichienda kuruboshwe, D kurudyi. Kuti tifambe nekukurumidza, tinozviita nekubatisisa pasi SHIFT kiyi pamwe neiyi kiyi W. Kuti tiite kusvetuka tinozviita neiyo space bar uye kuti tibatane pamwe nezvinhu zvemutambo isu tinofanirwa kusiya tinya uye kurudyi kudzvanya kumeso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Awkward Dimensions Redux - Yemahara Surrealism Game pane Steam
Inofanira kuwedzerwa kuti haisi muchiSpanish, icho chisina kukosha
Maitiro ekuisa iyo C uye C ++ compiler paAtomu?